Waxbarashadee Bay Horseedyada Helaan?
Iskuulka Gilecaad, Batterson, New York
Muddo dheer bay Markhaatiyaasha Yehowah caan ku yihiin waxbarashada Ilaahay ay dadka siiyaan. Kuwa waqtigooda oo dhan ku bixiya hawsha wacdiga waxbarasho gaar ah baa la siiyaa siday sida ugu fiican wacdigooda u sameeyaan.—2 Timoteyos 4:5.
Iskuulka Horseedka. Iskuulkan lix maalmood baa lagu qabtaa Hoolka Boqortooyada. Horseedka joogtada ah iskuulkan wuxuu ka qaybqaataa markuu dhammeeyo sanadkiisa ugu horreeya. Iskuulkan waxaa loogu talaggalay inuu caawiyo horseedka siduu Yehowah ugu dhowaado oo wacdigiisa oo dhan u fiicnaado oo uu si aammin ah adeegiddiisa u sii wato.
Iskuulka Wacdiyayaasha Boqortooyada. Iskuulkan laba bilood buu tababbaraa horseedyada waaya aragga ah. Kuwaas diyaar bay u yihiin inay xaafaddooda ka guuraan siday meel alla iyo meeshii looga baahan yahay u aadaan. Waa iyagoo leh camal “waa i kane aniga i dir” sidii Ciise oo ahaa wacdiyaha dunida ugu weyn. (Ishacyaah 6:8; Yooxanaa 7:29) Haddii ay meel fog u guuraan waxay keeni kartaa inay heerka noloshooda hoosaysiiyaan. Waxay u baahnaan karaan inay la qabsadaan dhaqan, hawo iyo cunto tay yaqaanneen ka geddisan. Malaha waa inay luqad cusub bartaan. Iskuulkan waxaa loola jeedaa nimanka iyo naagaha aan guursanin iyo kuwa guursaday oo daʼdooda u dhexeeysa 23 ilaa 65. Iskuulkan kuwaasi wuxuu ku caawiyaa inay kordhiyaan dabeecadda uu Ilaahay rabo iyo aqoonta u suuraggelinaysa inay Ilaahay wax u sii taraan.
Iskuulka Gilecaad. “Gilecaad” oo ah kelmed Cibraani ah waxay ka dhigan tahay Taallo Markhaati. Iskuulka Gilecaad 8,000 oo arday baa ka qalinjebiyay ilaa sanadkii 1943. Ardaydan waxaa loo diray inay markhaati furaan “ilaa meeshii dunida ugu fog” wayna ku liibaaneen. (Falimaha Rasuullada 13:47) Markii ugu horreysay ay kuwani yimaadeen waddanka Beru kiniisadba may jirin. Hadda waxaa jira kiniisado ay tiradoodu dhaaftay 1,000. Markay wacdiyayaashan aadeen waddanka Jabaan xitaa toban markhaati waddanka lagu ma arkin. Haddana waxaa jira in 200,000 ka badan. Shanta bilood oo Iskuulka Gilecaad Erayga Ilaahay si dhab ah baa loo dhigtaa. Iskuulkan waxaa ka qaybqaata horseedyada gaarka ah, wacdiyayaasha la diro, kuwa ka shaqeeya laamaha ama hoggaamiyayaasha safro. Iskuulkan kuwan wuxuu ku tababbaraa inay xasilaan oona aad u taageeraan hawsha caalamiga ah ee ururkeenna.
Maxay tahay ulajeeddada Iskuulka Horseedka?
Iskuulka Wacdiyayaasha Boqortooyada yaa loogu talaggalay?
Wadaag Wadaag Waxbarashadee Bay Horseedyada Helaan?